निगम श्रेष्डलाई नेपाली चलचित्रमा लुटले भित्राएको हो । निश्चल बस्नेतको चलचित्र लुटमा निगम चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर थिए । चलचित्र लुट हिट भयो । निश्चल बस्नेत रातारात हिट भए । उनको चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर भएर काम गरेका निगममा पनि राम्रो सम्भावना देखियो...
निकेश खड्का नेपाली चलचित्र उद्योगमा निर्देशनको काम गर्छन् । ‘जिन्दगी रक्स’ बाट फिचर फिल्म निर्देशनमका हातल हालेका उनकेन दोस्रो निर्देशन ‘फाटेको जुत्ता’ हो । ‘फाटेको जुत्ता’ मार्फत आफूलाई प्रमाणीत गरेर देखा...
सानोमा नितिनको रुची गीत गाउने थियो । उनी गीत गाउन भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे । भविश्यमा गएर गायक बन्छु भन्ने उनको रहर थियो । गायनप्रति रुची जाग्नुको कारण थिइन्, उनी ठूली आमा चन्द्रकला शाह । जो रेडियो नेपालमा काम गर्छिन् गायिकाको रुपमा । स्कुल पढ...
Naren LimbuaNepali singer andamusic video director was born in Moharang,Terthum. He is the youngest son of retired British Army Dal Narayan and Khin Maya Limbu. He spent his childhood days in many places. So, he too joined in different school...
निर्देशक नरेशकुमार केसीले हिमाली भेगको पृष्ठभूमिमा दिदी र भाइको आत्मीय सम्बन्धको कथा उनेर चलचित्र ‘डाइङ क्यान्डल’ (निभ्न लागेको दियो) बनाए । यस्तो सामान्य विषयमा पनि चलचित्र बन्छ ? भनेर कतिले उडाउने प्रयाश गरे । तर, त्यही चलचित्र...